घरेलु स्वास्थ्य – Page2– Nepali Health
पेटमा जुका लाग्नबाट कसरी जोगिने ? यी हुन् उपाय
April 6, 2019 April 7, 2019 Nepali Health Comment
मानिसलाई जुका लाग्नु भनेको उसको शरीरमा परजिवी पसेर पेटमा जुका पर्नु हो । मानिसलाई परजिवीबाट हुने रोगहरु मध्ये जुका नै सबैभन्दा धेरै लाग्ने रोग हो । यो धेरैजसो बिकासोन्मुख देशका मानिसहरुलाई लाग्दछ । किनभने बिकासोन्मुख देशमा ब्क्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाइमा जनचेतनाको अभाव र गरिबीको कारणल् यो रोग लाग्ने र कहिलेकाँही महामारीको रुप पनि लिन सक्छ ।
January 11, 2019 Nepali Health Comment
१. धुम्रपान नगर्नु : खाना खाने बित्तिकै धुम्रपान गर्ने ब्यक्तिलाई ग्यास्ट्राइटिसको समस्या निम्त्याउँछ र पेटसम्बन्धी रोगहरु उत्पन्न गराउँछ ।
तरकारी अचारमा पड्काउने मेथीका यति धेरै फाइदा
January 4, 2019 Nepali Health Comment
भान्सामा तरकारी अचार बनाउँदा प्रायः मेथीका दाना पड्काउने गरिन्छ । त्यसका साथै यसको पातलाई सागको रूपमा तरकारी बनाएर खाने चलन पनि छ । मेथी शारीरिक स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक छ ।
यी हुन् गाँजरका फाइदा
November 22, 2018 Nepali Health Comment
खानामा सलादको रुपमा प्रयोग गरिने गाँजरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए, बिटा क्यारोटीन, मिनरल्स,, एन्टी अक्सिडेन्ट हुन्छ । जुन शरीरका लागि लाभदायी हुन्छ ।
September 27, 2018 Nepali Health Comment
१. अकबरे खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण शरीरमा बिभिन्न रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ ।
September 25, 2018 Nepali Health Comment
अदुवा भान्समा प्रयोग हुने खाद्यबस्तु हो । यसको सेवनले शरीरका लागि निकै फाइदा गर्छ । अदुवालाई बिभिन्न परिका अचार,मासु, चिया तथा तरकारीहरुमा मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । यति मात्र नभई यसका अन्य धेरै फाइदाहरु छन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन-२०७४ को विरोधमा डाक्टरहरुको प्रदर्शन ( फोटोफिचर )
September 2, 2018 September 3, 2018 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, १७ भदौ । सरकारले १ भदौ देखि जारी गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको विरुद्धमा रहेको भन्दै चिकित्सकहरुले आज बृहत प्रदर्शन गरेका छन् ।
खोकीका बिरामीको उपचार विधिबारे डाक्टरलाई नयाँ सुझाव
August 24, 2018 August 25, 2018 Nepali Health Comment
बीबीसी । खोकी पीडित बिरामीलाई सुरुमा महबाट बनाइने घरेलु औषधि वा अन्य सामान्य ओखती दिनु पर्ने सुझाव ब्रिटेनको नयाँ स्वास्थ्य निर्देशिकाले दिएको छ। एन्टिबायोटिक्सले खोकी निको पार्न थोरै मात्र मद्दत गर्ने भएकोले चिकित्सकहरूले एन्टिबायोटिक्सको सिफारिस गरिहाल्न नहुने सुझाव दिइएको छ।
April 12, 2018 Nepali Health Comment
हाम्रो गाँउघर वरपर सहज रुपमा पाइने बनस्पति पुदिना स्वास्थ्यका लागि यति धेरै लाभदायक छ भन्ने कुरा सायदै थाह होला । तर आज हामी पुदिनाले स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाका बारेमा जानकारी दिन लागिरहेका छौँ ।
यस्ता छन् प्याजका ७ फाइदा
March 11, 2018 Nepali Health Comment
१. प्याजमा प्रशस्त मात्रामा सोडियम, पोटासियम र फस्फोरसका साथै एन्टीअक्सिडेन्ट र क्रोमियम नामक तत्व हुन्छ जसले शरीरमा पाचन प्रक्रियालाई सन्तुलित बनाउँछ ।